केसी अनशनको आठौँ दिन, विधेयक पास गराउन सभामुखले विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ : केसी - Naya Patrika
आठ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गराउन सभामुखले विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसद्को अवधि शुक्रबार सकिने भएपछि उनले सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई विशेष अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक पास गराउन अपिल गरेका हुन् ।
अनशनस्थल महाराजगन्जमा बिहीबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले सभामुखलाई माफियाको पक्षमा नभई जनता र देशको पक्षमा उभिन आग्रह गरे । बुधबार र बिहीबारको संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस नगर्नु दुःखद भएको उनले बताए । ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ समितिले तोडमोड गरेको विधेयकलाई सरकारले केही परिमार्जन गरेर ल्याउन लागेको छ,’ केसीले भने, ‘तर, माफियाको प्रलोभनमा परेका सांसदहरूले यसलाई रोकिरहेका छन् । यसलाई जनताले बुझ्न जरुरी छ ।’
सांसद घृणीत कार्यमा जुटे
डा. केसीले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि आफूले बारम्बार लडिरहेको बताए । ‘ऐन बनाउने ठाउँमा जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरू छन्,’ उनले भने, ‘तर, जनताको भन्दा व्यापारिक स्वार्थमा उनीहरू जोडिएका छन् ।’ सांसदहरू घृणीत कार्यमा जुटेको उनको आरोप छ । ‘अहिले हाम्रो दबाबमा सरकारले तोडमोड गरेको ऐनलाई केही परिमार्जन गरेर प्रस्तुत गर्न लागेको थियो, तर घृणीत व्यक्तिहरूले त्यसलाई बिथोल्न सफल भएका छन्,’ उनले भने । सबै मिलेर विधेयक पास नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको उनको भनाइ छ ।
केसीको मुटुमा समस्या भएको चिकित्सकको आशंका
डा. गोविन्द केसीको उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमले उनको मुटुमा असर परेको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । ‘छोटो अवधिमै शरीरका मांसपेशी कमजोर बन्दै जानुले मुटुमा असर परेको अनुमान गरिएको हो,’ मेडिकल टिमकी संयोजक डा. दिव्या सिंहले भनिन् । उनले यही अवस्था रहे मुटुमा थप समस्या भई कुनै पनि समय अप्रिय घटना घट्न सक्ने बताइन् ।
‘स्वास्थ्य परीक्षणपछिको रिपोर्ट हेर्दा केसीको मुटुमा असर पारिसकेको जस्तो देखिन्छ,’ डा. सिंहले भनिन्, ‘२४ घन्टामा ६ वटासम्म सलाइन पानी दिँदा पनि शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुनै तत्व बढेको छैन । यही अवस्था रहने हो भने, जुनसुकै समयमा पनि मुटुको चाल रोकिन सक्छ ।’ केसीलाई रिँगटा लागिरहने, शरीरका मांसपेशीहरू दुख्ने, बाउँडिने साथै छातीमा दुखाइ बढिरहेको उनले बताइन् ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार केसीको शरीरमा रहेको सेतो रगतको मात्रा कम हँुदै गएको, म्याग्निजियम, क्याल्सियम, सोडियम, पोटासियम र प्रोटिनको मात्रा कम छ । ब्लडप्रेसर निरन्तर घट्ने क्रममा छ । ‘पटक–पटकको अनशनले डा. केसी चाँडै शिथिल बन्दै गएको मेडिकल रिपोर्टले देखाउँछ,’ सिंहले भनिन् ।